Mccain Ndị Na-adịghị Mkpa Egwu 750G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Mccain Lighting Spice Wedges 750G– Ordrs
Mccain Ndị Na-atụ Uche Dị Mkpa 750G
Ejikọtara ya na poteto wedges nke ọma na ahịhịa na ngwa nri
Maka ozi ndị ọzọ lee www.mccain.co.uk
N'ebe a na McCain anyị bụ ụlọ ọrụ na-eri nri ezinụlọ, anyị makwaara nke ọma, nri n'eziokwu na-atọ ụtọ kacha mma. Ọ bụ ya mere anyị ji eme ka ihe dị mfe.
Anyị nwere obi ụtọ banyere poteto na ndị ọrụ ugbo anyị na-azụ ha. Ndị ọrụ ugbo anyị bụ ndọtị nke ezinụlọ McCain anyị na ụfọdụ n'ime ha arụ ọrụ karịa ọgbọ 3.
Site na nkpuru kachasị mma, anyị na-esi na poteto niile ewepụ ma jiri ịhụnanya na nlekọta na-eji ezigbo, ihe dị mfe na enweghị agba agba ma ọ bụ ihe nchekwa. Naanị poteto na-atọ ụtọ ka mmadụ niile nwee obi ụtọ!
Kwadebere mmanụ mmanụ sunflower
Halal - HFA kwadoro
Ngwugwu ngwugwu: 750g